Soo Laabashadiisa Bernabeu, Balan Qaadka Uu Jamaahiirta Madrid U Sameeyay, Bixitaankii Cristiano Ronaldo Iyo Wax Walba Oo Uu Zidane Kaga Hadlay Shirkiisa Jaraa'id. | Goolasha
You are at:Home»FALANQEYNTA»Soo Laabashadiisa Bernabeu, Balan Qaadka Uu Jamaahiirta Madrid U Sameeyay, Bixitaankii Cristiano Ronaldo Iyo Wax Walba Oo Uu Zidane Kaga Hadlay Shirkiisa Jaraa’id.
By Goolasha on	 March 11, 2019 FALANQEYNTA, HORYAALADA, Laliga, Wararka Maanta
Zidane oo Bernabeu saxaafada kula hadlayay ayaa yidhi: “Waa wax fiican in aan soo laabtay, in badan maan fogayn. Anigu waxaan ogahay in tani ay maalin khaas ah u tahay qof kastaba. Anigu waxaan ku faraxsanahay in aan halkan ku soo laabtay taas oo ah waxa ugu muhiimsan’.
Zidane oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Barri ayaan shaqada bilaaban doonaa si aan kooxdan ugu soo celiyo halka ay u qalanto.Waa masuuliyad wayn, anigu waxaan ahay mid ka mid ah xubanaha kooxda oo kaliya. Waxaan jecelahay kubbada cagta isla markaana maan ilaawin wixii aanu ku soo guulaysanay, laakiin sidoo kale maan ilaawin dhamaan waxyaabihii aanu sida xun u samaynay, anigu waxaan ogahay halka aan joogo”.
Zinedine Zidane oo balan qaad samaynaya isla markaana ka farxinaya jamaahiirta Madrid ayaa yidhi: “Wax walba oo igu jira waan dul dhigi doonaa si aan kooxda uga dhigo mid ka sii fiican.Waxaayuhu way isbadali doonaan. Way u baahan yihiin, laakiin taasi hadda muhiimada ugu saraysa ma aha, waxaanu haysnaa 11 kulan oo noo hadhay, fikraduna waa in aanu xili ciyaareedka si fiican ku dhamaysano”.
Maxaa maskaxda Zidane ku soo dhacay kadib markii uu Florentino Perez telefoonka ka wacay? jawaabta su’aashan ayuu Zidane ku yidhi: “Wixii ugu horeeyay ee maskaxdayda galay markii aan telefoonka helay ee laygu waydiiyay in aan soo laabto waxa uu ahaa in aan soo laaban doono, isla markaana hadda halkan ayaan joogaa”.
Zidane oo wax laga waydiiyay bixitaankii Cristiano Ronaldo ee Madrid ayaa yidhi: “Taas kuma saabsana, waxay ku saabsan tahay 11 ka kulan ee xili ciyaareedkan ka hadhsan. Dhamaanteen waxaynu ognahay taariikhda Cristiano uu kooxdan ka sameeyay, ma jiro hal qof oo waligii badali karaa taas. Waxaanu haysanaa 11 kulan oo ay tahay in aanu ciyarno oo sabtida ka bilaamaysa”.
Zidane ayaa iska diiday in uu wax abaal ah ku leeyahay Real Madrid wuxuuna yidhi: “Anigu ma filayo in aan wax deyn ah ku leeyahay Real Madrid, anigu waxba kooxda kuma lihi, halkan ayaan joogaa sababtoo ah aniga ayaa doonaya”.
Zidane oo ka hadlaya wixii uu qabanayay muddadii uu shaqada Madrid ka maqnaa ayaa yidhi: “Sagaalkii bilood ee ugu danbeeyay waxaan ku noolaa halkan Madrid, waxaan dabaysanayay baytariyadayda, hadda waxaan diyaar u ahay tartan kale oo kooxdan wayn ah -waa kooxda aan jeclahay”.